စိတ်ဆိုးတော် မူကြမှာလားဟင်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » စိတ်ဆိုးတော် မူကြမှာလားဟင်။
Posted by ခင်ခ on Sep 26, 2012 in My Dear Diary | 48 comments
ဒီနေ့တော့ အလုပ်လေးလည်းနားရက်မို့ နေ့လည်နေ့ခင်း မိုးလေးကလည်း မရွာပေမယ့် အုံဆိုင်းနေတာမို့ လမ်းလျောက်ရရင် နေမပူ အေးအေးလူလူရှိမယ်ဆိုပြီး ဟိုရွာအပြင် ဇနပုပ်တဲလေးမှာ ကြယ်မြင်လမြင် နဲ့ တူနှစ်ကိုတိုင်းပြည်လို့တင်စားကာ နေခဲ့တဲ့စံအိမ်တော်လေးမှ ခင်ခတစ်ယောက် ကြက်ခြေနီတံဆိပ် စတစ် ကာကပ်ထားတဲ့ လက်ဆွဲတော် ကွန်ပျူတာလေးလက်မှာပိုက်ပြီး ဂဇက်ရွာထဲလမ်းလျောက်ထွက်ခဲ့ပေါ့ဗျာ။
ရွာလည်အစွန်လမ်းမအတိုင်း လျောက်လာခဲ့တာ ရွာလမ်းပေါ်မှာ ရွာသူရွာသားတွေကင်းလို့ လမ်းရှင်းနေပါ ပေါ့လား၊ အဲဒါနဲ့ စတင်တွေ့ရတဲ့ ဘောလုံးနည်းပြဆရာကြီးကိုပေ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ဆရာပေတစ်ယောက် မျက်မှန် ကြီးတပ်လို့ Tebalet တစ်ခုနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတာမို့ လှမ်းလို့နုတ်ဆက်မိသေးဗျာ။
“ ဆရာကြီးပေ ဘာတွေများအလုပ်ရှုပ်နေတုံးဗျ´´ တပ်ထားတဲ့မျက်မှန်ကြီး လက်ကလေးနဲ့ပင့်တင်ပြီး
“ ဟာ ကိုခကြီးပါလား ထုံးစံအတိုင်း ပွဲစဉ်တွေကို အမြဲဆင်လို့ အကဲဖြတ်ပေး လက်မနှေးပေ့ါဗျာ´´
“ ရွာထဲလမ်းသလားမလို့ လိုက်အုံးမလားဗျ´´ လို့ဖိတ်ခေါ်တော့ ဆရာကြီးပေက
“ သွားနှင့်ဗျာ ကိုခကြီးရေ ပွဲလေးတွေဆင်နေလို့ပါ နောက်မှဘဲ´´ ဆိုတာနဲ့ ဆက်လျောက်လာခဲ့ပါရော။
အဲ နောက်ကအပြေးအလွှားလာနေလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကို the best မို့ လှမ်းမေးနုတ်ဆက်မိသေး
“ အပြေးအလွှားနဲ့ ဘယ်ကိုလဲဗျ ကို the best ´´ ဆိုပေမယ့် အပြေးတော့မရပ်ဘဲ အော်လို့ပြောသွားတာက
“ အရေးပေါ်လှေကားက ဂဟေဆက်ပြုတ်ပြီး လူတစ်ယောက်ကျတယ်ကြားလို့ဗျာ´´ ဘယ်မှာလဲမေးတာ တောင်မကြားလောက်တော့ဘူး အပြေးကလည်းမြန်သဗျ။ ဒါနဲ့ဘဲ ဘယ်လိုက်ရမှန်းမသိလို ရှေ့ကလမ်းခွဲလေး မှာချိုးကွေ့ အန်တီမမတို့ အိမ်ရှေ့ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတာတွေ့လို ခဏရပ်ဖတ်လိုက်တယ် ရေးထားတာက စိန်ရတုအခမဲ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်လိုလျှင်ဆက်သွယ်ပါဆိုလို့ စပ်စုအုံးမှဆိုပြီး အိမ်ထဲလှမ်းကြည့်တော့ လူရိပ်လူကဲမတွေ့တာမို့ ရပ်နေတုံး မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်က မအိကနေ လှမ်းပြီး- “ ဟေ့ ဦးခင်ခကြီး ဘာတွေ လှမ်းချောင်းနေတာလဲ ´´ ဆိုလို့ နောက်လှည့်ပြီး “ တိုးတိုးအော်ပါ မအိရယ် တော်ကြာ တခြားလူကြားလို့ ပြေးပေါက်မှားနေပါအုံးမယ်၊ အပျင်းပြေ လမ်း လျှောက်ထွက် လာရင် စာရင်းကိုင်သင်တန်းဆိုင်းဘုတ်တွေ့လို အန်တီမမ ကို စပ်စုမေးမလို့ပါ´´
“ အော် အဲလိုလား၊ အန်တီမမ ရွာလည်ကသူကြီးအိမ်သွားတယ်နဲ့ တူတယ် ခုလိုနေခင်းဘက်ဆို ရွာအကဲ ဖြတ်လူကြီးတွေစုပြီး လဘက်စား ရေနွေးကြမ်းသောက် စကားဝိုင်းဖွဲ့တတ်ကြတယ်လေ လာပါအုံး ထိုင်အုံး လေ´´ ဆိုတော့မှ အိမ်ထဲကြည့်မိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ခင်ခတစ်ယောက်အံအော်သွားတယ်၊ ရှမ်းပြည်တောင် ပိုင်းနှင့် ကလောအလှ ဓာတ်ပုံပြခန်းဆိုပါလား၊ ဒါနဲ့ဘဲ ဓာတ်ပုံပြခန်းထဲ ၀င်ပြီး အလှပုံတွေကြည့်နေစဉ်မှာဘဲ ပုဂံလေးကိုင်ကာ ပြန်ထွက်လာလို့ “ ဦးခင်ခ သုံးဆောင်ပါအုံး မအိလက်ရာ ပေါင်မုန့်ပူတင်းလေ´´ ဆိုပြီး ပေးတော့ ဓာတ်ပုံအလှပြခန်းမှာရှိ ဆက်တီမှာထိုင်ပြီး ခင်ခလည်း စားရတာပေါ့၊ စားရင်းနဲ့ ခြံရှေ့မှာ ပန်းပွင့်နေ တာတွေ့လို “မအိရေ အဲဒါဘာပင်လဲဗျ၊ တစ်ခါမှမတွေ့ဘူး´´ ဆိုတော့ မအိက “ အဲဒါ သဇင်နီပန်းလေ´´ ဆိုပြီး သဇင်နီပန်းအကြောင်းရှင်းပြပေးတာ ပူတင်းလေးစားလို့ နားထောင်လိုက်ပေါ့။ ဒါနဲ့ဘဲ ခဏကြာတော့ “ ပူတင်းက စားလို့လည်းကောင်း၊ သဇင်နီပန်း အကြောင်းလဲ ဗဟုသုတအဖြစ် ကျေးဇူးဘဲ မအိရေ လမ်း သလားလိုက်အုံးမယ်´´ ဆိုပြီး နုတ်ဆက်လို့ဆက်ထွက်လာ တော့ ကိုကြောင်ဝတုတ် တယောက် ဆေးလိပ် ကြီးတဖွာဖွာနဲ့ အိမ်ရှေ့ကွပ်ပစ်မှာ ဂဏန်းပေါင်းစက်တစ်လုံးနဲ့ စာရွက်တွေကြား အလုပ်ရှုပ်နေတာ လှမ်းတွေ့ပါ ရော တစ်ခါတစ်လည်း ခေါင်းကိုကုတ်လိုက် ဆံပင်သပ်လိုက်နဲ့ မို့ “ ကိုကြောင်ဝတုတ် ဘာတွေ များ အသဲ အသန်တွက်ချက်ကောင်းနေတာလဲဗျ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ကျွန်တော်နဲ့လမ်းလျှောက်လိုက်ခဲ့ပါလား ´´ ဆို လိုက်တော့ ကိုကြောင်ကြီးက “ ဆယ့်လေးသိန်းအလွန်အခွန် ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ ရတဲ့ငွေနဲ့ ဘယ် လောက် ဆောင်ရမလဲ တွက်နေတာဗျို့ အခုတော့ မလိုက်နိုင် သေးဘူး အကိုရေ´´ ဆိုလို ရှေ့နားလှမ်း မျော် ကြည့် လိုက်တော့ ဘယ်တုန်းကဖွင့်လိုက်လဲမသိ ရွာထဲလမ်း မသလားဖြစ်တာ ကြာတဲ့အချိန်မှာ ကြီးကျယ် လိုက်တဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ကြီးပါလားလို့ အနီးနားရောက်မှ စာအုပ်ဆိုင်အမည်ကိုသေချာ ဖတ်မိတာ ရွှေအိမ်စည်စာအုပ်စင် မှာ သင်လိုချင်တာရွှေးလို့ဝယ်ယူနိုင်သော ဘုတ်ဘူးဖေး စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲ တော်ဆိုဘဲ၊ ကိုရွှေအိမ်စည်တို့များ များစွာသောစာအုပ်တွေစုဆောင်းပြီး ဆိုင်ဖွင့်ထားတာအံချက်ပါဘဲဗျာ။ အထဲမှာလည်း ရွာသူရွာသားလေး ငါး ယောက်လောက် ၀ယ်နေကြတာတွေ့ရလို့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်လေးတွေ ၀င်ရွှေးဝယ်လိုက်အုံးမယ်လို့ ဆိုင်ထဲဝင်မယ်လုပ်တုန်း နောက်ကနေပြီးတော့ ခေါ်ပြောလိုက်တာက “ကိုခင်ခ ဘာတွေဝယ်အုံးမလို့လဲဗျ´´ အမေးရှိလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုဆာမိ ဖြစ်နေတာနဲ့“ ဘယ်လဲဗျ၊ ကိုဆာမိရဲ့´´ ဆိုတော့“ ဟိုဘက်လမ်း ကျောင်းနားမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ရွာဈေးတန်းမုန့်ဆိုင်တွေဆီလေ၊ ကလေး တွေအတွက် မုန့်သွားဝယ်မလို့ဗျာ´´ ကိုဆာမိပြောလို့၊ ခင်ခလည်းအံအော်စွာနဲ့ “ရွာမုန့်ဈေးတန်းမုန့်ဆိုင် ဟုတ်လား၊ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမရောက် ဖူးဘူးဗျ ရောက်ဖူးတယ်ရှိအောင် လိုက်ခဲ့အုံးမှဘဲ´´ ဒါနဲ့ဘဲ ကိုဆာမိက “ဒါဆိုလာလေ၊ အတူတူသွားကြ တာပေါ့၊ စာအုပ်နောက်မှအေးဆေးလာ ၀ယ်ပေါ့ဗျာ´´ ဆိုလို ကိုရွှေအိမ်စည်ကို “နောက်မှဘဲ အေးဆေး စာအုပ် တွေလာရွှေးဝယ်တော့မယ်ဗျာ၊ အခုတော့ အဖော်ကောင်းတုန်းလိုက်သွား လိုက်အုံးမယ်´´ နုတ်ဆက်ပြီး ကိုဆာမိနဲ့ နှစ်ယောက်သား လမ်းလျှောက်လာရင်းစကားဖောင်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာ။
“ ကိုခင်ခ ရှေ့ရွာလယ်လမ်းဆုံက သူကြီးအိမ်ရှေ့ကတော့ ဖြတ်ရမှာဗျ´´ ကိုဆာမိကဆိုတော့ “ အင်းလေ ဒီလမ်းကသွားရမှာ ဆိုတော့ဖြတ်ရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုဆာမိကလည်း´´ အဲဒီမှာ ကိုဆာမိက “ ဒီလိုရုံး ပိတ်ရက်နေ့လည်ခင်းဆို သူကြီးအိမ်ရှေ့ခုံတန်းမှာ ရွာအကဲဖြတ်အဖွဲ့တွေ စကားဝိုင်းရှိတယ်လေ ကိုခင်ခ မသိဘူးလား´´ ကျွန်တော်က “ ခုနတော့ မအိနဲ့တွေ့လို့တော့ပြောသား ဘာဖြစ်လို့လဲ´´ “ ကိုခင်က ကလည်းအခုရွာထဲမှာ ယောကျာ်းလေးတွေဆို ရေလဲပုဆိုးတို့၊ ပုဆိုးဖင်ပေါက်တို့၊ သရုပ်ပျက်တာ မဟုတ်ဘဲ အခုကိုခင်ခ ၀တ်လာသလို ဘောင်ဘီတိုကွာတားနဲ့ တီရှပ်လက်ပြတ်မျိုးတို့လိုမျိုး၊ မိန်းကလေးတွေဆို လည်း စကတ်တို၊ လက်ပြတ်အင်္ကျီ၊ အပေါ်ပိုင်းမပါ ရင်ရှားလိုလို ဒီဇိုင်းမျိုးတွေဝတ်ပြီး ရွာအကဲဖြတ်အဖွဲ့ရှေ့ ကို ဖြတ်မသွားရဲကြဘူးလေ၊ အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးနေတာ အမှတ်တွေရော့မပေါ့ အခုရွာထဲခေတ်စားနေတာ အမျိုးသမီးတွေဆို သုတထိုင်းမသိမ်းနဲ့ ရသချိတ်ထမီ်၊ အမျိုးသားတွေဆို သုတရှပ်အင်္ကျီနဲ့ ရသပိုးပုဆိုး လေ၊ အဲလိုမှမ၀တ်ဖြစ်ရင်တောင် ရွာအကဲခတ်လူကြီးတွေမျက်စိမနှောက်အောင် ၀တ်ရတယ်လေ´´ အဲဒီမှဘဲ ခင်ခလည်းကိုယ်ဝတ်ခဲ့တဲ့ ပြန်ငုံကကြည့်ပြီး “ သြော် ကိုဆာမိပြောမှ သတိရတယ်ဗျာ ဇန်နာဝါရီဆုပေးပွဲ အတွက် အကဲဖြတ်စနစ်ရှိနေတာမို့ ဟိုအရင်တုန်းကလို ကိုယ်ဝတ်ချင်သလို ကိုယ်နေချင်သလို ထက်စာရင် ရသ၊ သုတ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု့တွေကို စောင်းပေးလာကြတယ်ဆိုတာလေ၊ ကျွန်တော်မှာက ကောင်းကောင်း ကန်းကန်း ရသရှပ်အင်္ကျီမရှိတော့ ခက်သပေါ့ဗျာ၊ ၀တ်လာပြီးမှတော့ မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ ခပ်ရို့ရို့လေးဖြတ်သွား ကြတာပေါ့´´ ဆိုပြီးနှစ်ယောက်သား သူကြီးအိမ်ရှေ့အဖြတ်မှာဘဲ ခေါ်လိုက်တဲ့အသံတစ်ခု ကြားလိုက်တာမို့ နှစ်ယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင် အကြည့်မှာ ကိုဆာမိမျက်နှာက ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ အမူအရာပါနေတယ်လို့ ခံစားမိလိုက်တယ်၊ ကိုပေါက်ရဲ့ “ ကိုဆာမိနဲ့ ကိုခ ဘယ်လဲဗျ၊ လာအုံးလေ ရေနွေးကြမ်းသောက်ပါအုံး´´ ခေါ်သံပါ၊ ဒါနဲ့ဘဲ သူကြီးအိမ်ဝင်းထဲ ခပ်ရို့ရို့လေး ၀င်သွားပေါ့၊ ရွာလူကြီးတွေဆိုတော့ လမ်းပေါ်က အော်ပြီး ပြောလို့မတင့်တယ်ဘူးလေ၊ အနီးနားရောက်မှ “ လမ်းလျှောက်ထွက်လာရင်း ကိုဆာမိနဲ့ လမ်းမှာဆုံလို့ ရွာမုန့်ဈေးတန်းဘက် မရောက်ဘူးသေးလို့ သွားမလို့ပါ ´´ ဆိုပြီးပြောတော့ အရီးခင်လတ်က “ ကိုခင်ခ တွေ့တာနဲ့ အတော်ဘဲ သိချင်တာလေးတစ်ခုမေးလိုက်အုံးမယ် ´´ ကျွန်တော်က “ ဟုတ်ကဲ့ မေးပါပေါ့ ´´ ဒါနဲ့ဘဲ အရီးက “ အခုကျမတို့ လဘက်ထဲ ကြက်သွန်ဖြူထဲ့စားတာ ဘာများကောင်းလဲလို့ သိချင်တာ´´ လိုဆိုတော့ လူကြီးတွေထိုင်နေတဲ့ ရှေ့ကစားပွဲပေါ် ခင်ခရဲ့ ကြက်ခြေနီတံဆိပ် ကွန်ပျူတာကိုချပြီး ဖွင့်ကြည့်ကာ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကျန်းမာရေးဆက်ဆပ်ပုံကို ရှာပြီးရှင်းပြပြောပြပေါ့ ဒါနဲ့ဘဲ အရီးလည်းကျေနပ်ပြီး “ ကဲ ကဲ သွားစရာရှိတာ သွားလေ´´ ဆိုတော့မှ ကြက်ခြေနီစတစ်ကာနဲ့ ကွန်ပျူတာလေးပိုက်ပြီး ဖြေးညင်းစွာ သူကြီး အိမ်ကထွက်လို့ ဆက်လျှောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။
အဲဒီသူကြီးအိမ်က အလွန် မောင်မိုးညို အိမ်ရှေ့ဖြတ်တော့ မောင်မိုးညိုတစ်ယောက် သတင်းစာတွေအထပ် လိုက်ချပြီး ပြည်သူလွှတ်တော်ဘယ်လဲ သိရအောင် သတင်းစာ တစ်စောင်ပြီးတစ်စောင် မွှေနှောက်ဖတ်နေလေ ရဲ့၊ အဲဒီက ဆက်လျှောက်မိတော့ လုံမလေးမွန်မွန် အိမ်ရှေ့အဖြတ်မှာ မွန်မွန်က“လေးလေးခ ဘယ်လဲ´´ လှမ်းမေးလို့ “လာ လိုက်မလား ရွာမုန့်တန်းဘက်ကို´´ လို့ဆိုတော့ “လေးလေးခ က ၀ယ်ကျွေးမှာလား´´ ဆိုလို့ “ ကျွေးပါတယ်ဗျာ လိုက်ခဲ့လေ´´ ဆိုတော့ လက်ထဲရေးလက်စ စာရွက်တွေကို သိမ်းပြီးလိုက်ခဲ့တယ်၊ ဒါနဲ့ဘဲ စပ်စုပြီးမေးကြည့်မိသေးတယ် “သမီးဘာတွေ ရေးနေတာလဲ ကြိုးစားပန်းစား´´ ဆိုတော့ မွန်မွန်က “မောဟမျဉ်းပြီုင်နှစ်ကြောင်း၏ရာဇ၀င် ဆက်ရေးနေတာပါ ´´တဲ့။ အဲဒီကနေ ဆက်လျှောက်လာတော့ ကိုထွန်းဝေ တစ်ယောက်စာအိတ်လေးကိုင်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်က လျှောက်လာတာတွေ့လို့ “ ကိုထွန်းဝေ ဘယ်လဲဗျ´´ လို့ စကားစတော့ ပြန်ပြီးဖြေရင်းဆက်လျှောက်သွားတာက “ ချစ်ဇနီးမြရင်သို့ပေးစာ လေး ရွာစာတိုက်က ပို့မလို့ပါဗျာ´´ တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ ရွာဈေးတန်းကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ခင်ခတစ်ယောက် အလွန် အံအော်မိသပေါ့ ဗျာ၊ “ ကိုဆာမိ အခုလို ဆည်ကားပြီးရှိနေတာ ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာ၊ ဈေးဆိုင်တွေလည်း စုံလို့ ရွာထဲက လူတွေလည်း အပြင်လမ်း မသလားဘဲ ဒီမှာလာစုနေကြတာကိုး´´ “ ဟုတ်တယ် ကိုခင်ခရဲ့ ဖွင့်ကြတာတော့ မကြာသေးပါဘူးလေ ကဲ ကိုခင်ခ ဘာစားမလဲရွေးဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ ကလေးတွေက အတွက် အရင်ဝယ်လိုက်အုံးမယ်၊ ပြီးလာခဲ့မယ် ဆိုပြီး သူ့ကလေးတွေအတွက် ၀ယ်ရမယ့်မုန့်ဆိုင် သို့သွား တော့ “ကဲ လုံမလေး သမီး ဘာစားမှာလဲ´´“ လေးလေးခရော၊ သမီးကတော့ဖက်ထုပ်စားမယ်´´ ဆိုလို့ မအိတုံရဲ့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ၊ ဖက်ထုပ် ဆိုင်ဝင်ထိုင်ပြီး ကော်ရည်တစ်ပွဲ၊ ဖက်ထုပ်တစ်ပွဲ မှာလိုက်ကာဈေးတန်း ကို လိုက်ကြည့်လိုင်တော့ ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေက-
မအိတုံရဲ့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ၊ ဖက်ထုပ်
မနိုဗွီရဲ့ ကြက်ပဲဟင်း၊ ကျောက်ပွင့်သုတ် နဲ့ အော်ကွေ့ကြည်
မဝေက ရွှေဖရုံသီးဟင်းချို၊ ငါးဆန်လှော်ဟင်း၊ ရခိုင်မျှစ်စပ်ဟင်း၊ ဂေါ်ရခါးသီးကြော်၊ တို့ဟူးကြော် နဲ့ အော်ကေ့ကြည်
မမေဖလားဝါးရဲ့ ကင်ချီထမင်းသုတ် နဲ့ မွန် မျှစ်ချဉ်ပေါက်ဟင်း နှင့် ငါးပိထောင်းစပ်လေး ၊ ငါး ဖက်ဖယ်ရွက် ချဉ်စပ်ဟင်း နဲ့ သင်္ဘောသီးထောင်း ။ မမေဖလားဝါးက သူဆိုင်မှာ Ninh Binh ခရီးစဉ် ဓာတ်ပုံအလှများကို ချိတ်ဆွဲပြီး ဆိုင်ကို တန်းဆာဆင်ထားတာတွေ့ရတယ်လေ။
ဒဿဖွတ်ကျားကတော့ ဖဿအချိုရည် ဆိုပြီးဆိုင်ဖွင့်သလို၊
အဲ ဈေးတန်းရဲ့ အတွင်းဘက်မှာတော့
ကိုအောင်မိုးသူရဲ့ အချစ်နဲ့ဝိုင်တစ်ခွက် ဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ၀ိုင် ရောင်းနေပြီး၊
မဟာအံစာတုံးက မည်သူမှ ဘီးအီးမသောက်ရ ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံခြား အရက်အစုံ ရောင်း တဲ့ဆိုင်။
ကို the best က ဘီယာသောက်ပါ ဆိုပြီး ဆိုင်ဘုတ်လေးတပ်လို့ စည်ဘီယာ ဆိုင်ဖွင့်ထားတာတွေ့ရပြီး ကိုသုဝေ တစ်ယောက်ကတော့ အဲဒီဆိုင်မှာ မိန်းမနဲ့အမေ ဘာကွာလဲ ထိုင်ကာ အဖြေရှာနေလေရဲ့။
ဒါနဲ့ဘဲ မအိတုံရဲ့ ကော်ရည် နဲ့ ဖက်ထုပ် ပြုလုပ်ပြီး လာပို့တာနဲ့ ကျွန်တော်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ကော်ရည်ကိုစားရင်း၊ မွန်မွန်ကတော့ ဖက်ထုပ်စားကာ မအိတုံလည်း အနီးနားလာထိုင်လို့ မနိုဗွီဆိုင်မှာ ကြက်ပဲဟင်းနဲ့ ထမင်းစား ပြီးတဲ့ ကိုဖိုးထောင် နဲ့ ကိုဖရဲ လည်းရောက်လာပြီးလာစုကာ အရင်ရောက်နှင့်နေပြီး မဝေဆိုင်က ဂေါ်ရခါးသီး ကြော်ပွဲလေးယူလို့ ရောက်လာတဲ့ မရွှေကြည် အဲလိုနဲ့ လူစုံလေးဖြစ်ပြီး ရောက်တတ်ရာရာ စကားဝိုင်းလေး စည်ကား နေပေါ့၊ ကိုဆာမိတစ်ယောက်ကတော့ သူကလေးတွေအတွက် မနိုဗွီဆီက အော်ကေ့ကြည်၊ မဝေဆီ က တို့ဘူး ကြော်ဝယ်လို့ “ ကိုခင်ခရေ ကလေးတွေမျော်နေတော့မယ် လစ်ပြီးဗျို့ ´´ ဆိုပြီး သုတ်ခြေတင် သွား လေရဲ့၊ ဒီလိုနဲ့ဘဲ စားသောက်လို့ပြီး၊ စကားလေးတွေလည်း ဖောင်ဖွဲ့ပြောကြတာ အတော်ကြာလာလို့ “အားလုံးဘဲ ခွင့်ပြုပါအုံးလို့´´ဆိုတော့မွန်မွန်က “သမီးဆက်နေလိုက်အုံးမယ် လေးလေးခ´´ဆိုတာနဲ့ မဒမ်ခင်ခ အတွက် မေဖလားဝါးဆီက ကင်ချီထမင်းသုတ်နဲ့ မနိုဗွီဆီက ကျောက်ပွင့်သုတ်လေး ပါဆယ်ဝယ်ပြီး ရွာဈေးဆိုင်တန်းလေးကအထွက် မအိတုံက “ အန်ကယ် ပါဆယ်လေး မဒမ်ခင်ခ ပေးရင်း ချစ်တယ်ပြောဖို့ မမေ့နဲ့ အုံးနော်´´ လို့လှမ်းပြောတာလေးတော့ ကြားလိုက်မိတယ်လေ။
အဲလိုနဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ကိုအလင်းဆက်တစ်ယောက် အိမ်ရှေ့မြေကွက်လေးမှာ ကလေးငယ်လေးတွေကို ကကြီး ခခွေး သင်ပေးနေတာ ကျွန်တော်ဖြတ်သွားတော့ “ ထ´´ ကိုသေချာသင်နေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လေ၊ မမယ်ပု တစ်ယောက် ဟိုတလောကတော့ ရွာထဲကကြားတာ ALLergy ဖြစ်လို့မို့ ၀င်ပြီးမေးမလို့ မမယ်ပု အိမ်ရှေ့ ရောက်တော့ အိမ်တံခါးပိတ်ထားတာတွေ့ရတာမို့ မ၀င်ဖြစ်ခဲ့ဘဲ ဆက်လှမ်းကာလျှောက်ခဲ့တာ ခင်ခနေ ထိုင်ရာ ဟိုရွာအပြင် စနပုပ်တဲလေးဆီကိုပေါ့လေ။
အခုတလောဖတ်ခဲ့မိတဲ့ ပိုစ့်လေးတွေကိုစဉ်းစားမိရင်း ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်လေးတွေကို အတွေးနယ်ချဲ့ကာ ရေးမိရေးရာ ရေးလိုက်မိခြင်းအတွက် ပိုစ့်ပိုင်ရှင်များ အမည်နာမများသုံးစွဲရေးမိသော ရွာသူရွာသားများခင်ဗျာ ခွင့်ပြုချက် မယူမိ ဘဲရေးလိုက်မိခြင်းအတွက် ခင်ခမှ အနူးအညွတ်တောင်းသလို အခုလိုရေးမိတာကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ရွာသူရွာသားများ စိတ်ဆိုးတော် မူကြမှာလားဟင်။
စိတ်မဆိုးတတ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေပဲလေ ……… ကိုယ့်ပို့စ်လေးတွေကို ညွှန်းတာ ပိုလိုတောင်ဝမ်းသာကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ……
၀ိုင်တွေ..ဘီယာတွေ ဘီအီးတွေ အမြည်းတွေ.. ဖောချင်းသောချင်း ပါနေတာပဲ..
ပထမဆုံး ကွန်မန့်ပေးတဲ့မခိုင်နဲ့ ဆိတ်မဆိုးတဲ့ စိန်ဗိုက်ဗိုက် တို့ ကျေးဇူးနော်။
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်းပို့စ် အဆုံးသတ်လေး
ယေက္ခမတို့ ….. ယောက်မတို့ … တားတားယေးတို့ …… ဆွေတော်ရှစ်သောင်းမျိုးတော်အပေါင်းတို့ …… နာ့ဆိုင်မှာ လာစားကြနော် …. ။ ဒါကုန်ရင်… ဖျာပုံပြန်မလို့ ….. ခွိခွိ :harr:
ဖျာပုံပြန်မယ်ဆိုလည်း လိပ်စာလေးတော့ မစခဲ့အုံးနော်။
ဆိုးတယ်..ဆိုးတယ်……….ကြိုးစားချက်ထားတဲ့ မွန်မျှစ်ပေါက်ဟင်းလေးကြ အားမပေးသွားဘူး :chee:
ကင်ချီထမင်းသုတ်က အဆန်းလေးမို့ မဒမ်ကိုကျွေးချင်လို့ အဲဒါကိုရွေးဝယ်သွား မိတာပါ ခွင့်လွှတ်နော်။
အဟီး…………..နောက်ပြောတာနော် ကိုခင်ခ တကယ်ကြီးထင်မသွားနဲ့အုန်း ရွာထဲထမင်းဆိုင်ဖွင့်ခွင့်ရတာ
အိမ်တံခါး ပိတ်ထားတာက ရွာလည်ထွက်နေလို့ပါ။ ခုပြန်ရောက်ပါပြီ။ နေအကောင်းလွန်သွားလို့ အိမ်ရှိလူကုန် အနော့်ကို မျက်စိနောက်နေကြောင်းပါ။
နေအကောင်းလွန်နေတယ် သိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်နော်၊ နောက်ကြုံရင်ဝင် လည်ပါအုံးမယ်။
အော် ရွာထဲ မီးချိတ် မီးဂတ် လိုက်စစ်နေတာနဲ. ကိုယ်ခင်ခနဲ. မတွေ.လိုက်တာ နာသကွာ……နို.မို.ဆို စိတ်မဆိုးတဲ့အထဲ ပါအုံးမယ်……… အခုတော့ အဟင့်………..
သများအကြောင်းကြထည့်မရေးဘူး….. ဟွန်. ဒီမယ် ကိုခင်မခတခ နောက်တစ်ခါ ရွာထဲလမ်းလျှောက်ရင် လမ်းလျှောက်ခွင့် တင်ပြီးမှ လျှောက်………. ဒါပဲ……….
ပုံ ဆယ်အိမ်ဂေါင်း ရွှေတိုက် :hee: :hee:
ကိုရွှေတိုက်စိုး အကြောင်းရေးချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဆယ်အိမ်ခေါင်းတို့ ရွာလူကြီးတို့ ကျတော့ရမ်းပြီး မရေးရဲဘူးဗျ အရေးမတော်ရင် ဒုက္ခတွေ့နေမှာဖြစ်၊ ခုတောင် ဆယ်အိမ်ခေါင်းဆရာရွှေတိုက် လွတ်ပြီထင်လို့ လမ်းလျှောက်မိတာ နောက်ဆိုကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တင်ဖို့ အမိန်ထွက်လာပါကောလား။
ဆိုးတယ် ရွှေကြည်စိတ်ဆိုးတယ် ရွှေကြည်တို့အိမ်ဘက်အလည်မလာလို့ အဟဲ နောက်တာ..။
အမယ် အိမ်လာလည်တော့ကော သူရှိတာကြနေတာဘဲ၊ မဝေဆိုင်က ဂေါ်ရခါးသီးကြော်
လေးယူပြီးလာပြီးထိုင်တုန်းကဖြင့် ကိုခင်ခ စားပါအုံးလားတောင် တစ်ချက်မပြောဘဲနဲ့။
အင်း .. ရွာမုန့်ဈေးတန်းလေးသွားအုံးမှ …
ကိုခင်ခရေ ခင်ဗျားတစ်ခုမေ့နေခဲ့သလားလို့သတိပေးတာ … ရွာလမ်းမှာရန်ပွဲတွေလည်းတွေ့ခဲ့သေးတယ် မဟုတ်လား … ဟိ..
ပျော်စေပျက်စေ စနောက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ မည်သူ့ကိုမျှမရည်ရွယ်ပါ။
ကျွန်တော် လမ်းသလားတုန်းက မတွေ့ခဲ့ဘူးဗျ။
အစ်ကိုက အားတယ်ဆိုလို့ အားကျသဗျာ ။ ခုရက်ပိုင်း ရွာထဲ မနဲအချိန်ပေးနေရတယ် ။
ညနေကတည်းကဖတ်ပြီး သဘောကျနေတာ ။ ခုမှမန့် ရတယ် …နောက်ကျနေပြီဆရာရေ ….
လကုန်ရက်နီးနေလို့ဗျို့  ….။
ကိုဆာမိရေ ကျွန်တော်က အားတယ်ဆိုတာလည်း ဖတ်ရတဲ့စာချိုးတစ်ခုလို
ကံကောင်းချင်တော့ ချစ်တဲ့သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ်၊
ကံကောင်းချင်တော့ အချိန်ကပို။ စရိတ်ကပို ( ကလေးအတွက်မရှိတော့ )
ကံဆိုးချင်တော့ အသက်ကြီးတဲ့အခါ ကျောထောင့်နောက်ခံ သားသမီးမရှိ၊
ကံကောင်းချင်တော့ စိတ်ပူစရာမရှိလို့ အသေဖြောင့်နိုင်ပေါ့ဗျာ။
အဟီး.. အနော်ကတော့ လေးလေးခ၀ယ်ကျွေးတဲ့ ဖက်ထုပ်ကို စားရတယ်..ဟိဟိ… မုန့်စားရတဲ့နေရာက နေရတာပဲ…ဆိုးပါဝူး… စာရေးနေရင်းနဲ့ လှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တာ…ရွာမုန့်ဈေးတန်းမှာ မုန့်စားရတယ်… မိုက်တယ်ကွာ… :harr:
အမ် လှမ်းခေါ်မိတာ မှားပြီးနဲ့တူတယ်၊ စတာပါဗျာ အပြင်မှာ ဆုံဖြစ်တဲ့အခါလည်း မုန့်ဝယ်ကျွေးပါ့မယ်ဗျာ၊
ခုမှပဲ ရွာထဲမှာ ဘယ်သူဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရတော့တယ်။ ရွာပြင်ရောက်နေတာ အတော်ကြာနေပြီပဲ။ အတော်စည်းကားနေတဲ့ရွာထဲ မရောက်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျန်းမာရေးက ချူချာ… အလုပ်များတာကတစ်ပိုင်းနဲ့… ဟူး မလာတာကြာလို့ အိတုံက အလကားမတ်တင်း စားသွားဆိုလို့ စားလိုက်တာ ဗိုက်တောင် အောင့်လာလို့ အိတုံရဲ့ ကိုကိုဆရာဝန်လည်း ရှိနေသမို့.. ဆေးခန်းပြလိုက်တာ တံပိုးထက် လက်ခံကြီးနေပါလေရော…
အော် မနှောကလည်း အလားမတ်တင်းရတာနဲ့ မချင့်ချိန်ဘဲစားတာကိုး။
နောက်မှတ်ထားပေါ့ အစား နဲ့ လက် ဆိုတာ သရမ်းတိုင်းမကောင်းဘူး ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် လုပ်ရတယ်လို့။
စာရင်းကိုင်သင်တန်းဖွင့်တာ တွက်ခြေမကိုက်တာလို့ ဘာလုပ်ရကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတာနဲ့ ကိုခင်ခလာမှန်း မသိလိုက်ဘူး။
သိများသိရင် ကိုခင်ခနဲ့အဖော်လိုက်ပြီး ရွာထဲလှည့်ပါတယ်။
ပြီးရင် အိမ်ပေါက်စေ့ဝင်ပြီး ဧည့်သည်လုပ်ရမယ်။
ရွာသူတွေ အချက်ကောင်းတာ သိထားတယ်လေ။
ဟုတ်ပ အန်တီမမ နဲ့မတွေ့လိုက်တာနာသွားတယ် ဒီပြင်ဆို ကျွန်တော်လည်းဧည့်မြှောင် လိုက်လုပ်ပြီး စားရအုံးမှာနော်။
အကြွေးချည်း လာလာဝယ်နေလို့ ..
အိုက်ဒါ .. ပြန်ပိတ်လိုက်ပီဂျာ ..
ခုတောင် သူ့ဆီက အကြွေးသွားတောင်းဖို့ ထွက်လာတာ ..
ဒေါက် .. ဒေါက် .. ဒေါက် ..
ဟေ့တောင် ချိန်ဗိုက် ..
ကိုအံစာတုံး နဲ့ အလင်းဆက်ရေ ကျေးဇူးပါနော်။
ဘောလုံးပွဲ ပို့ စ်ကို ပြန်တင်ဦးမယ်ဗျာ
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ တနင်္ဂနွေတုန်းက လာတင်တဲ့ လူတွေ ဘယ်ပျောက်ကုန်ကြလဲ မသိဘူး
တင်မယ်ဆိုရင်လဲ ပွဲရှိတဲ့နေ့ တိုင်း တင်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူး ။
အခုတော့ မန်းတလေးမြို့ က ၊ ကျုပ် ဘောလုံးပို့ စ်လေးတွေ ကို အမြဲ အားပေးတဲ့ ပရိသတ် ၁၅ယောက်လောက် က ဘာလို့ မရေးတာလဲ တဲ့ ။
အိုက်ဒီ လူဒွေဂ စိတ်ပေါက်တုန်း
ခဏတဖြုတ် ဝင်ရေးကြတာ နေမှာပါ …
ဒီတော့ ခညားဂျီးပဲ ဆက်ရေးပေါ့ဂျာ …
အဲ့လူဒွေကို မှုမနေနဲ့ …
ဒါနဲ့ ဟိုအဘဂျီး အကြောင်းဒေါ့ ဆက်ဖို့ ကျံဒေးဒနော် ..
အလှူပေးသလို ဒီအတိုင်းလာလာ ယူသွားကြလို့။
ကိုပေါက်ရေ အင်တာနက်ပေါ်တင်တဲ့ပုံကတော့ ရေစက်ချပြီးတာ ကလစ်ခေါက်တင် လိုက်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ယူသွားတဲ့သူက တန်ဖိုးထားလို့ သိမ်းထားတယ်ဆို
ကိုခင်ခကြီး အိမ်ကထွက်တော့ မျက်မှန်ပါမသွားတာ …
ကျုပ်နောက်ကလှမ်းအော်သေးတယ် …မကြားပဲနဲ့ဆက်ထွက်သွားတယ်လေ ..
ဟီးဟီး နောက်တာပါဗျာ …. ကျုပ်နာမည်က ထွန်းပြောင်ပါဗျ ….
ဟုတ်လားဗျ၊ ရွာလယ်ချင်ဇောနဲ့မို့ မကြားလိုက်တာနေမှာ ကိုထွန်းပြောင်ရေ။
သူလမ်းလျှောက်လိုက်မှပဲ.. ရွာကတော်တော်စည်နေတာ.. သတိထားမိတော့တယ်..။
“ဘုရင်အလောင်းမင်းတရားမှ ဘုရင်ဂျော့-၂ ထံပေးပို့သော ရာဇသံရွှေပေ” ကို.. အစအဆုံး.. ဆရာမ၀င့်ရဲ့.. ဘာသာပြန်ထားတာ.. ရထားတာ..ကိုခင်ခကို.. ပေးမဖတ်တော့ဘူးဆိုပဲ..။ :harr:
သူကြီးရွာကလည်း ဒီလိုဆိုတော့လည်း ခေတ်မှီသားနော်၊
ရှေ့ကလျှောက် နောက်ကတိုင်စာရောက် မို့လေ။
၀င်ခဲ့ပါအုံးဗျ…အဲဒီနေ့က ဆယ်အိမ်ဂေါင်း ရွှေတိုက် က ကျုပ်ထန်းတော
အပေါ်မှာ ဦးရွှေတိုက်စိုးရဲ့ နောက်တစ်ခါ ရွာထဲလမ်းလျှောက်ရင် လမ်းလျှောက်ခွင့် တင်ပြီးမှ လျှောက်…လို့သတ်မှတ်ချက်ကြီး ရှိပါပေါ့။ လျှောက်ဖြစ်တောင် လျှောက်ဖြစ်ပါအုံးမလားဗျာ။
သူကြီး ကို ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲလေးလုပ်ရအောင်ဗျာ
ကိုခင်ခ ရွာထဲ လမ်းလျှောက်ထွက်တော့မှပဲ ရွာကြီး တော်တော် စည်ကားနေတာတွေ့ရတော့တယ်
ဒီကြားထဲ နွယ်ပင်လည်း အလုပ်များနေတာနဲ့ ရွာထဲ သိပ်မထွက်ဖြစ်ဘူးလေ …
ကျွန်တော် ရွာထဲလမ်းလျှောက်ပြန်မှ မနွယ်ပင်လည်း နောက်ထပ်တိုးပြီး ဆိုင်ဖွင့်တာသိရတယ်။
“ပုဇွန်အစိမ်းသုပ်နဲ့ တုံယမ်းဟင်းရည်” လေ။
နိုဗွီ့ဆိုင်က ကြက်ပဲဟင်းနဲ့ ထမင်းဝင်စားသွားလို့
ကျွန်တော်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော်။ ကြက်ပဲဟင်းကတော့ ကောင်းဆိုဘဲ။
နှမ်းတစေ့နဲ့ ဆီကြိတ်မယ်တဲ့ .. မနိုင်ဝန်လားနိုင်ဝန်လားတော့မတိ ..
ဘ၀ကြင်ဖော်ရှာတော့မယ်ဆို မှန်ကြည့်မိရမယ် …
ဦးခိုင်ကို အားကျတဲ့သူက ကျနော် Fatty ပါတဲ့ ..
အဲအချိန်မှာ လူကြီးလူကောင်း မောင်ဝါ၀ါက ဘာ..ကွ ဆိုပြီး ..
ကတိများကို မဆောင်ရွက်ပါက နှုတ်ထွက်မယ်ဆိုပီး စိတ်ိဆိုးတော်မူသတဲ့ …
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ပဲ .. ဘီ အီး မသောက်ရဆိုလို့ ဘီယာတစ်ခွက်မော့သွားတယ်ဂျာ ..
မေဂျူလိုင်ရေ ဘီယာသောက်ဖို့ကျတော့ လက်တို့ပြီးတော့တောင် မခေါ်ဘူးနော်။